Alnico Magnet Material, China Alnico Magnet Material Manufacturers, Supplier, Factory - QIANGSHENG MAGNETS CO., LTD
Ny fitaovana Alnico (misy aluminium, nickel, ary kobalt miaraka amina singa kely maro hafa ao anatin'izany ny titanium sy ny varahina) dia manome alàlana famolavolana latina manome marika haingony, angovo avo ary famonoana avo lenta. Ny haingam-peo Alnico dia asongadin'ny fametrahana mari-pana tsara ary tsara ny fanoherana ny demagnetisma noho ny fikovototra sy ny fahatairana. Ny magneto Alnico dia manolotra ny toeran'ny mari-pana mety tsara indrindra amin'ny fitaovana vita amin'ny magnetika famokarana mahazatra. Azo ampiasaina amin'ny fangatahana adidy mitohy izay misy hafanana miakatra hatramin'ny 930F.
Ny magneto Alnico dia amboarina amin'ny alàlan'ny fizotrana na fanodinana. Ny magneto Alnico dia tena henjana ary maranitra. Ny makenam-pandehanana na ny drill dia tsy vitan'ny fomba mahazatra. Ny volobe dia matetika voatahiry ao amin'ny fananganana. Arotsaka na manota araka izay azo atao ny magnets mba ahafahana mihetsika ny fametavetana hamaranana ny refy sy ny fandeferana
Teknika fanaterana manokana natao hanatratrarana ny tsimokaretina varimbazaha tokana hita ao amin'ny mari-pahaizana 5 sy 8. Ireo mari-pahaizana anisotropika ireo dia natao hamokatra vokatra magnetik avo amin'ny lalana voafaritra. Ny orientation dia tanterahina mandritra ny fitsaboana hafanana, amin'ny alàlan'ny hatsiaka ny fandefasana ny 2000F amin'ny salan'ora voafehy ao anaty sahanam'azy izay mifanaraka amin'ny làlana tianao indrindra amin'ny magnetization. Alnico 5 sy Alnico 8 dia anisotropika ary mampiseho torolàlana mifantina amin'ny orientation, ny orientation Magnetika dia tokony hofaritana amin'ny sarinao rehefa mandefa baiko ho anay ianao.
Cast Alnico 5 no be mpampiasa indrindra amin'ny cast Alnico's .Mangaro amin'ny indostrialy avo lenta miaraka amin'ny vokatra angovo avo 5 MGOe na mihoatra izy io ary ampiasaina betsaka amin'ny milina fihodinana, fifandraisana, metatra ary zavamaneno, fitaovana enti-mahatsapa ary mihazona fampiharana. Ny fanoherana avo lenta ny demagnetization (herim-pamoretana) an'ny Alnico 8, votoatin'ny kobalta hatramin'ny 35%, dia mamela ity fitaovana ity hiasa tsara mandritra ny halavany fohy na ho an'ny refin'ny halavan'ny savaivony latsaky ny 2 ka hatramin'ny 1.
Ny fitaovana sintered Alnico dia manolotra fananana magnetika kely kokoa fa ny toetra manta mekanika noho ny fitaovana Alnico. Ny magnétes Alnico sintered dia mety indrindra amin'ny habeny kely (latsaky ny 1 oz.) Amin'ity dingana ity. Ny fifangaroana vita amin'ny vovony vy maniry no natsangana mba hamolavola sy habe ao amin'ny faty iray, avy eo novana tamin'ny 2300 F tao anaty habakabaka hidrogen. Ny fizotry ny fakan-tsofina dia mifanentana amin'ny famokarana be dia be, ary miteraka faritra izay matanjaka kokoa noho ny andry cast. Ny fandeferana akaiky dia azo tanterahina nefa tsy mifangaro
Ny mampiavaka ny Alnico Magnet:
* Ny fanovana kely amin'ny magnetic amin'ny fiantraikan'ny mari-pana
* Ny mari-pana miasa ambony indrindra dia mety ho avo hatramin'ny 450oC ~ 550oC.
* Hery mahery vaika.
* Fahaiza-miady fanoherana mafy, tsy misy palaka ilaina amin'ny fiarovana amin'ny tany.
• mety amin'ny fehezanteny misy haingam-pandeha kely misy endrika marobe
• kristaly mihetsika, mahery vaika
• Endrika tsy tapaka, habe fametahana
• Na ny singa, ny fampisehoana maharitra
• mety amin'ny magneto sôkôla
• Ny mari-pana tsara dia tsara (temp. Coefficient de Br no kely indrindra amin'ireo magneto maharitra rehetra
Zavaboary sy ara-batana an'ny Cast Alnico Magnet
Grade Kilasy MMPA mitovy Remanence Herim-pamoretana Vokatra angovo lehibe indrindra hakitroky Temp miverina. Coefficient Temp miverina. Coefficient Curie Temp. Temp. Coefficient fanamarihana
mT Gs KA / m Oe Prot / m3 MGOe % / ℃ % / ℃ ℃ ℃
Zavaboary sy ara-batana amin'ny Magnet Alnico sintered
naoty Kilasy MMPA mitovy Remanence Herim-pamoretana Herim-pamoretana Vokatra angovo lehibe indrindra hakitroky Temp miverina. Coefficient Curie Temp. Temp. Coefficient fanamarihana
mT Gs KA / m Oe KA / m Oe Prot / m3 MGOe % / ℃ ℃ ℃